Madaxweynaha Koonfur galbeed oo maanta gaaray Afgooye – Radio Muqdisho
Madaxweynaha maamulka Koonfur galbeed Soomaaliya Mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ay wehliyaan qaar kamid ah Wasiirada maamulkiisa oo maalmihii la soo dhaafay booqasho ku marayay degmooyinka ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose ayaa maanta gaaray degmada Afgooye, isagoo kulamo kula leh waxgaradka iyo maamulka degmada.
Socdaalka Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa la sheegay in ay ku saabsan tahay soo geba gebeynta dib u heshiisiinta qaar kamid ah Beelaha wada dega gobolka taas mudooyinkii dambe halkaasi ka socotay.
Gudoomiye ku xigeenka maamulka gobolka Shabeelaha Hoose, Cali Nuur Maxamed ayaa sheegay in madaxweynuhu uu hadda kulamo la leeyahay odoyaasha isagoo kala hadlaya dardargelinta arimaha dib u heshiisiinta.
Dhinaca kale Xildhibaan Cali Yuusuf Cismaan “Cali Ganey” oo ka tirsan Mudaniyaasha golaha Shacabka ayaa sidoo kale maanta gaaray degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay mas’uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur galbeed, maamulka degmada iyo qaar kamid ah shacabka ku nool degmadaasi.
U jeedada booqashada Xildhibaanka ayaa la xiriirta u kuurgalidda xaaladaha ka jira degmada Afgooye iyo Tuulooyinka Hoos yimaada.
Gudoomiyaha degmada Afgooye, Xaaji Gaabow Cismaan oo soo dhaweynta Xildhibaanka ka hadlay ayaa sheegay in ku faraxsan yihiin imaanshaha Xildhibaanka.